Xasan Sheekh oo si weyn loogu soo dhoweeyay Magaalada Dhuusamareeb (Sawirro) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Xasan Sheekh oo si weyn loogu soo dhoweeyay Magaalada Dhuusamareeb (Sawirro) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweyne Xasam Sheekh Maxamuud ayaa lugtii labaad ee socdaalkiisa dowlad Goboleedyada kyu gaaray maanta magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug.
Wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb kusoo dhaweeyay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor) Xubno kale oo kamid ah Maamulka galmudug, Wasiiro iyo Xildhibaano katirsan dowladda Federaalka & qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Madaxweynaha ayaa inta uu ku jiro socdaalkiisa Galmudug wuxuu la kulmi doonaa madaxda iyo Waxgaradka Galmudug, isagoo kala hadli doona dib u heshiisiinta, abaaraha, iyo xasillooni siyaasadeed.
Madaxweynaha ayaa Galmudug u tegay si uu uga miro-dhaliyo qorshihiisa ku aaddan Soomaali heshiis ah, taas oo aas-aas u ah hirgelinta dib u heshiisiin dhab ah, mideynta shacabka Soomaaliyeed iyo xorreynta dalka, waxa uuna Madaxweynuhu muujiyey in uu u kuur-gelayo xaaladaha nololeed ee ka jira Galmudug, si dowladda federaalka ah ay doorkeeda uga qaadato horumarinta deegaanka iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka abaaraha.
“Dhulka Galmudug ay ka kooban tahay in badan ayaa xor ah, in yarna cadowga Alshabaab ayaa ku harsan, waana u taagan yihiin reer Galmudug in ay xoreeyaan dhulkaas oo maalin walba waxay cadowgaas kula jiraan dagaal, anaguna waxaan ku garab istaagaynaa sidii ay cadowgaas muddada dheer ku daahay isaga xoreyn lahaayeen, taasina waxay ku suurta gelaysaa inanga oo midowna, qalbiyadana isu furna.”
Xasan Sheekh socdaalkiisii koowaad ku tegay magaalada Baydhaba, waxaana la sheegay in labada maamul oo madaxweynayaashooda ay taageersanayeen Farmaajo uu kala hadlayo sidii ay wadashaqadyn u yeelan lahaayeen
Previous articleMuqdisho: Qeylo-dhaan ka timid Baraha Bulshada oo sababtay in la furo Jid la xiray
Next articleMaamulka K/Galbeed oo shaqadii ka joojiyey Guddoomiyihii Afgooye iyo Arrinta sababtay